1. Hadiyad ahaan Mararka qaarkood waxay ku timaadaa dhululubo dhaadheer oo aan si qarsoodi ah ugu wareeri karno taas Sidee loo sameeyaa duubista hadiyadaha silsiladda Maanta waxaan haysannaa dariiqo aan ku abuuri karno farxad marka aan noqonno bixiye. Oo buuxi qanacsanaanta qofka qaata ee arkay farshaxanka iyo daryeelka talaabo kasta oo laga qaado sawirka ugu horeeya ayaa ah in lagu duubo qof kasta oo hela hadiyad xafladdan gaarka ah. Eeg cunteena iyo daryeelkeena Dheeraad ah, markaad dhamaysid, waxaad dareemi doontaa sharaf aad u weyn.
2. Qalab loo isticmaali jiray Duubista hadiyadda silsiladda
3. - Hadiyad duub Xullo si aad uhesho dabeecada qofka wax helaya. Adeegsiga midabbo iyo qaabab habboon Da'dan waxaa laga yaabaa inay raadineyso warqad dabiici ah. Taasi waxay siinaysaa dareen diiran oo gaar ah, maahan wax lala yaabo Haddii ay tahay sanduuq ballaadhan oo ballaadhan, warqadda la xushay waxay noqon kartaa mid weyn. Ama u isticmaal warqadda isku darka si aad u sameysid duub qurux badan - - Qaansada ama xarkaha laga yaabo inay fududahay inaad adigu sameysatid ama aad ku xirnaato ubax qalalan ayaa u qurux badan mid kale - Maqasyo ayaa loo isticmaali jiray in lagu jaro warqadda, laguna gooyo qaanso xarig ah. - Koolada cajalad-furan iyo cufka laba-geesoodka ah - Sanduuqa silsiladda Waxaad ku xiran kartaa hadiyad ku jirta cabirka saxda ah. Ama waxyar ka dheer Hadday tahay sanduuq hadiyad ah oo meesha lagu qurxin jiray Ka dib dooro cabirka la dhigay oo u muuqda mid muuqda
4. Talaabooyinka iyo sida loo duubo hadiyad dhululubo ah.
5. - Ka bilow cabirka warqadda hareeraha sanduuqa silsiladda si aad ugu habboonaato. Labada dhinac ee ballaaran iyo kuwa dhaadheerba - Isku laab kor iyo hoosba si siman - Ku ilaali dhamaadka warqadda cajalad hufan oo ku lifaaqan sanduuqa dhinaca ku yaal. Oo labalaab ku dheji dhinaca kale si aan raadraac loo arki karin Dhamaad dhamaadka warqadda hoos Oo lagu hagaajiyaa cajalad hufan - Isku day inaad wax ku xagasho xagal qumman Had iyo jeerna u isticmaal cajalad hufan si aan u ilaalinno khiyaanooyinka aan kor ku qabanno Samee cayrsiga illaa goobtu ka dhammaato. Oo labada dhinacba samee
6. - Warqadda u jar goolal oo ku dheji dusha sare.
7. - Xarigga si qurux badan korka saar - waa la qabtay. Hubi dhammeeyay oo la keenay
8. Kuma adka Sida loo duubo hadiyad dhululubo ah Oo waliba waxay siin kartaa qofka qaata rajo kale Qaabka sanduuqa ayaa u eg sidan. Maxaad ku heli doontaa hadiyad ahaan? Iyo dhamaadka sanadka Sanduuqa hadiyad ee silsiladda ayaa la diyaarin karaa. Sida qurxinta guriga ama geeska kirismaska Si loo helo cabbir aragtiyeed qaabab kala duwan Ku dar qurux iyo farxad mar kale, fudud oo aan dhib lahayn.
9. Inaad wax ku qabato jacayl iyo ujeedo Natiijooyinka marwalba way wanaagsan yihiin, ku martiqaad carruurtaada inay ku soo biiraan waxqabad hadiyad ah oo loogu talagalay dadka aad jeceshahay. Inkasta oo xirfaddu aysan ka soo bixin doonin tan ugu quruxda badan Laakiin jacayl iyo daryeel Waa waxqabad qurux badan oo qoyska dhexdiisa ah. Hawl kale oo diirran oo aad rabto inaad isku daydo !!